I-Soy de Mac iyinhlangano yeqembu le-Intanethi le-AB ukuthi kusukela ngo-2008 ibilokhu yabelana nabo bonke abafundi bayo izindaba, okokufundisa, ubuqili nalo lonke ulwazi lwamanje mayelana nobuchwepheshe jikelele kanye neMac ikakhulukazi.
KwaSoy de Mac siyacaca ukuthi into ebaluleke kakhulu ukwaba imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka mayelana nokuthi yini enothando ngempela ngabo bonke abasivakashelayo futhi abadinga noma abafuna imininingwane eningiliziwe ngemikhiqizo noma isoftware ehlobene ne-Apple neMac. Umphakathi wabasebenzisi uyaqhubeka nokukhula usuku nosuku futhi namuhla singasho ukuthi siphakathi kwemithombo yezindaba enethonya elikhulu kumaMac naku-Apple iyonke.
El iqembu lokuhlela likaSoy de Mac Yenziwe ngababhali abalandelayo:
Uma ufuna futhi ukuba yingxenye yethimba lokubhala likaSoy de Mac, gcwalisa leli fomu.
Umxhumanisi eSoy de Mac kusukela ngo-2013 futhi ujabulele imikhiqizo ye-Apple ngawo wonke amandla nobuthakathaka babo. Kusukela ngo-2012, lapho iMac yokuqala ifika empilweni yami, angikaze ngiwathokozele kakhulu amakhompyutha ngaphambili. Ngenkathi ngisemncane ngangisebenzisa ama-Amstrads ngisho neComodore Amiga ukudlala nokudlikiza, ngakho-ke isipiliyoni ngamakhompyutha ne-elekthronikhi yinto esegazini lami. Okuhlangenwe nakho okutholwe ngalawa makhompyutha phakathi nale minyaka kusho ukuthi namuhla ngingabelana ngokuhlakanipha kwami ​​nabanye abasebenzisi, futhi kungigcina ngifunda njalo. Uzongithola ku-Twitter njengo @jordi_sdmac
Kuze kwaba maphakathi no-2000 lapho ngiqale ukungena ku-Mac ecosystem nge-MacBook emhlophe engisenayo. Njengamanje ngisebenzisa iMac Mini kusuka ngo-2018. Nginolwazi olungaphezulu kweminyaka eyishumi ngale ndlela yokusebenza, futhi ngithanda ukuhlanganyela ulwazi engiluthole ngenxa yezifundo zami nangendlela engizifundise yona.
Umlandeli wezobuchwepheshe ngokujwayelekile kanye nomkhathi we-Apple ikakhulukazi. Ngicabanga ukuthi ama-MacBook Pros amadivayisi ahamba phambili ku-apula. Ukusebenziseka kalula kwe-macOS kukunika amandla wokuzama izinto ezintsha ngaphandle kokuhlanya. ITouch Bar kufanele ibe yisibopho kuwo wonke amakhompyutha.
Kuxhunywe endaweni yonke eyenziwe nguJobs noWoz, selokhu i-Apple Watch yami yasindisa impilo yami. Ngiyakujabulela ukusebenzisa iMac yami nsuku zonke, kungaba ngomsebenzi noma ubumnandi. IMacOS yenza kube lula kuwe.
IBachelor of Medicine kanye nodokotela wezingane ngokubiza. Ngikuthanda kakhulu ubuchwepheshe, ikakhulukazi imikhiqizo yakwa-Apple, ngijabule ngokuba ngumhleli we- "iPhone News" nethi "Ngivela kwaMac". Kuboshwe ochungechungeni ngohlobo loqobo. I-Podcaster ene-Actualidad iPhone ne-miPodcast.
Isithandwa sobuchwepheshe, ikakhulukazi imikhiqizo ye-Apple. Ngifunde nge-macbook, futhi njengamanje iMac iyisistimu yokusebenza engiphelezela nsuku zonke, ngesikhathi sami sokuziqeqesha nesikhathi sokuphumula.
Uyahlanya ngobuchwepheshe, ezemidlalo nezithombe. Njengabaningi, i-Apple iguqule izimpilo zethu. Futhi ngithatha i-mac yami noma yikuphi. Ngiyakuthanda ukuba sesikhathini sakho konke, futhi ngethemba ukuthi kuyakusiza ukujabulela lolu hlelo lokusebenza njengoba ngenza.
Uchwepheshe we-microcomputer selokhu aqala, ngiyazifela ngobuchwepheshe jikelele ne-Apple kanye nemikhiqizo yayo ikakhulukazi, engiyithanda kakhulu iMac.Ngijabulela zombili izikhathi zomsebenzi nezokungcebeleka nge laptop yami.
Ngimane ngithanda kakhulu imikhiqizo ye-Apple, njengezigidi zabanye abantu. IMac iyingxenye yempilo yami yansuku zonke futhi ngiyazama ukuyiletha kweyakho.
UJesu Arjona Montalvo
Unjiniyela kuzinhlelo ze-iOS ne-IT, okwamanje ugxile ekufundeni nasekuzibhaliseni nsuku zonke ngohlelo lokusebenza lwe-Apple. Ngicwaninga yonke into ephathelene neMac futhi ngiyabelana ngayo ezindabeni ezizokugcina usesikhathini.
I-Electronic Engineer inothando lomhlaba we-Apple futhi ikakhulukazi nge-Mac, yalabo ababhejela izinto ezintsha nobuchwepheshe njengendlela yokwenza ngcono imvelo yethu. Umlutha wokungalilahli ithemba nokufunda umzuzu ngamunye. Ngakho-ke ngiyethemba ukuthi konke engikubhalayo kuyasiza kuwe.
Ngihlale ngizimisele ukufunda, ngithanda konke okuhlobene nobuchwepheshe obusha nokuxhumana kwabo nomkhakha wezemfundo kanye nemfundo. Ngiyazifela nge-Mac, engifunda kuyo njalo, futhi ngiyaxhumana njalo ukuze abanye abantu bakwazi ukujabulela lolu hlelo lokusebenza olukhulu.
Ngikuthanda kakhulu ubuchwepheshe ngokubanzi, futhi ikakhulukazi ngomhlaba we-Mac. Ngesikhathi sami samahhala, ngizinikela ekuphathweni kwamaphrojekthi athile kanye nezinsizakalo zewebhu ezifana Isazi se-iPad, Izibalo zeCoronavirus o Ikheli le-IP, njalo nge-Mac yami, engifunda kuyo nsuku zonke. Uma ufuna ukwazi imininingwane nobuhle balesi simiso sokusebenza, ngiyethemba uyazithanda izindatshana zami.
Ukubhala nobuchwepheshe yizinto ezimbili engizithandayo. Futhi kusukela ngo-2005 nginenhlanhla yokubahlanganisa ngokubambisana nabezindaba ezikhethekile emkhakheni, ngisebenzisa iMacbook. Okuhle kunakho konke? Ngiyaqhubeka nokujabulela njengosuku lokuqala ngikhuluma nganoma yiluphi uhlelo abalukhipha lolu hlelo lokusebenza.
Sawubona lapho! Ngisakhumbula lapho ngithola iMac yami yokuqala, iMacBook Pro endala ukuthi yize yayindala kune-PC yami ngaleso sikhathi yayinika ukuphenduka okuyinkulungwane. Kusukela ngalolo suku bekungekho ukubuyela emuva ... Kuyiqiniso ukuthi ngiyaqhubeka nama-PC ngezizathu zomsebenzi kepha ngithanda ukusebenzisa iMac yami "ukunqamula" futhi ngisebenze kumaphrojekthi wami.